Ururo dalbaday in la baaro cunsuriyada ka dhanka ah Soomaalida | Somaliska
Dhowr urur oo isugu jira kuwa Islaami ah iyo kuwa u dooda xuquuqda bani’aadamka ayaa dowlada Sweden qaasatan wasiirka cadaala Beatrice Ask ugu baaqay in ay samayso gudi baaritaan ku sameeya dhacdooyinkii cunsuriyada ahaa ee loo geystay Soomaalida ku nool tuulada Forserum.
Ururada kala ah Afrosvenskarnas riksförbund iyo ururka Muslimiinta u dooda xuquuqda bani’aadamka ayaa sidoo kale warqad u qoray qaramada midoobay si ay cadaadis ugu saaraan dowlada Sweden in ay wax ka qabato cunsuriyda ka dhanka ah dadka Madoow qaasatan Soomaalida.
-Dowlada Sweden ayay saarantahay masuuliyada in ay dhowraan xuquuqda shacabka. Qaabkaas ayaa arinta xal looga gaari karaa. Waxaa kale oo wanaagsan in UNka ay soo diraan dad arintaan kala hadla Sweden – Ayuu yiri Kitimbwa Sabuni oo madax ka ah ururka Afrikaanka Sweden.
Kitimbwa Sabuni ayaa qaasatan sheegay in uu ka carooday qaabka ay siyaasiyiinta iyo booliska Sweden ula dhaqmeen Soomaalida. Waxa uu sheegay in ay tahay mid laga xumaado in arintaan ay socotay mudo balse boolisku aysan waxba ka qaban, siyaasiyiintu aysan arinta fiiro gaar ah u yeelana iyo in dadweynaha tuuladu ay arintaan indhaha ka qarsadeen.
Kitimbwa Sabuni ayaa sidoo kale cambaareeyay qaabka ay warbaahinta qaarkood u muujiyaan in Soomaalidu ay yihiin dad dhibaato ku qaba arimaha isdhexgalka.
– Arinta isdhexgalka maxaa ka galay xuquuqda bani’aadamka. Qaasatan xaqa uu qofku u leeyahay amaanka, in uu iskuulka aado iyo xaqa in aan la cunsuriyayn ma ahan mid ku xiran arinta isdhexgalka. In eeda la saaro dadka dhibanayaasha ah ma ahan mid caadi ka ahan aduunka- ayuu ku soo gabagabeeyay Kitimbwa Sabuni.
Waalayaab maxaa loo la,yahay soomaali kahadasha arimaha dadkan dhibaataysan oo maantay afrikaanku noogu daqnanaayo. Maxaa loo mudaharaadi la,yahay.Aaway soomaalidii siyaasiyiinteedii? aaway waxgaradkeenii mawaxaan noqonay maato caanaleh. Ilaahow dalkeena nabad nooga dhig.
away labadii xildhibaan ee somalida ahaa kuna jiray barlamaanka sweden, ma magac u yaalbaa tolow mise waxay wax u qabtaan qabiilkooda, ilayn qabiil laga wayi maayo somali meelkasta oo ay joogte, subxaan waar niyow rabi talo ku filan.
Ra´yigeega waa marka hore waxa nalaga sheegayo waa in aan wax ka dhexbaxsanaa waxna aan iska diidna…Mida cunsurayada & aflagaada aan meel loogugu soo gamban waan diidena totaly..Balse mida ah ma rabaan in aay wax bartaan ama shaqeystaan ama bulshada wax la wadagaan taasi absolutely waan ku qaldanaha aan gar qaadano… waa iga talo.
waxaan rabaa inaan Somali tusaleeyo dadnimo xumadooda, dulqaad la’aantooda iyo waliba Diin xumidooda. Intaas ka dib ninkan wuxuu u danqaday Afiran ahaan balse waxaan fool xuma ah dadnimo xuma ah anagoo isku Diin ah, isku dad ah, isku dal , isku dhiig ah waliba is dhalnay isla dhalanay, aanan haysan isku duubni iyo urur na mathala Somali oo dhan, Yaa lahwii!!! lakiin waxaan leenahay jaaliyado ku dhiman qaabka ugu xun ee wax lagu dhiso (Qabiil) marka la dhisayana lagu dhiso Somali oo lagu daray Förening Yaa lahwii. marka iney dadka kale noo doodaan oo lacagna nagu qaatan waa waxaan anaga sabab u nahay Somaliyeey. hadaad dadka wax kaa sheegayna aad gartaada la dhigan leheyd meelba laguuguma sheego oo laguugu soo hagaago, sababtoo ah Qabiil baad meel la yuurartaa, meesha dadka ay hal oraah ay ku midoobeen. Diin iyo dadnimo intaba ma haysano ee aan is daba qabano Somaliyeey. wabilaahi towfiiq.
waa idiin salaami marka horo soomaali kale hadee soomali kalo ku samey laheed rag badan oooka hadlo ayaa la arki lahaa lkn hadaan soomaali nahay anagaa isku xoog weyn shasheeyahane waan qadarinaa hadaa dhabta laga carareen
waa kaxumahay somalida tuuldaas ku nool ama guud ahaan meelaha cunsuriyada kajirto dadka kunool inlaahay dhibyareeyo ayaan ka baryaa
Asc! Run ahaantii waa wax laga xumaado dhacdadan,waxaana yaab leh intaas oo jaaliyadood ayaa jira oo si kale loo adeegsado, wax ay u qabteena ma aananan maqal danaha Soomaalida uun mid ba lagu naas nuujiyaa amaba koox. Maanta haddii dadkaas Soomaaliyeed ay ku qeyliyaan war yaa reer Qansax ama Qurac ah: waxaa laga yaabaa in loo gurman lahaa.yaa Soomaali aheey iyo yaa Islaam ahey waxaa laga yaabaa hadey oran lahaayeen in aan loo gurmaneyn bal ka waran noloshaas xayaatu duliga ah, marka waxaa haboon inaan laga harin arintaas cunsuriyadda ku dhisan oo meel la iska saaraa. Qofkii naga mid ah oo la dhibaateeyo iskuna gurmanaa oo xataa dadkeena sharciga lagu adkeeyey iyo qaraabadda kala maqan laga hadlaa oo lamaanaha rasmiga ah oo kala maqan la isku keenaa laga hadlaa had iyo goor. Intaas oo dhan waxay ku xiran tahay waa midnimaddeena Soomaaliya kaca waad qalibanteena wabillaahi Towfiiq. Asc.